Isixuku / Wechat / Whatsapp:+ 86-579 82728689
EPS Cornice Molding Machine
Umshini Wokubumba we-EPS
I-EPS Pre expander
EPS Umumo Molding
Uhlelo Lokuvuselelwa Kwe-EPS
Phinda usebenzise uhlelo
Umshini we-EPS Pelletize
I-Automatic Big SPJ150 Batch pre-expander isebenza ngempumelelo eSaudi.
I-Automatic Big SPJ150 Batch pre-expander isebenza ngempumelelo eSaudi. Okukhethekile ngobuningi obuphansi. Umshini unokwandiswa kokuqala nokuphindwe kabili, isikrini sokuthinta ne-PLC ilawulwa, ukufinyelela kalula ku-8g / l nge-Sabic F760 ne-China Material ZKF 302.
I-EPS Inesicelo esikhulu ekuhlobiseni kwangaphandle nangaphakathi
I-EPS Decoration yinto entsha yokwakha yokuhlobisa udonga lwangaphandle nokuhlobisa kwangaphakathi kophahla, okwenzeka ohlelweni lwe-GRC, umhlobiso weMarble, kanye ne-GYPSUM kumhlobiso wasendlini, ngenxa yamaphuzu aqinile alandelayo: 1, Imiklamo eminingi futhi elula. 2, isisindo esincane. 3, Okwezomnotho ...
Siqala ukusebenza ngomhlaka 18 Feb. 2020
Ngenxa yegciwane leCorona, Siqala ukusebenza ngomhlaka 18 Feb. 2020 ngemuva kwekhefu lesikhathi eside. Ngenxa yendlu eluhlaza, ngithanda ukubonga ukwesekwa kwakho ngo-2019 nokukhathazeka kwethu ngaso sonke isikhathi, Sizoqhubeka sigxile emkhakheni wemboni ye-EPS, Sikunikeze insizakalo yobungcweti. Ngifisa sengathi singakwazi ...
Isingeniso Eps Foam Board
Ubuhlalu be-polystyrene obunwebekayo obunamakhemikhali oketshezi oketshezi oketshezi yizinto ezimhlophe ezifudunyezwa futhi zibunjwe kusikhunta ngemuva kokufudumezwa kwangaphambili. Zinezici ezinhle zesakhiwo esivaliwe samaseli. Ibhodi le-foam le-b1 grade eps yinto emhlophe eyenziwe ngobuhlalu obunwebekayo be-polystyrene obuqukethe ukungaziphathi kahle ...
ILanxi Lvjian New Building Material Factory, ikwenzela imigqa esezingeni eliphakeme ye-EPS
ILanxi Lvjian New Building Materials Co., Ltd.yibhizinisi lokukhiqiza eliphelele elihlanganisa ukukhiqiza, ucwaningo nentuthuko, ukuthengisa nokufaka. Ngokuya ngokugaywa nokuhlanganiswa kobuchwepheshe obuthuthukisiwe bangaphandle, inkampani icwaninga ngokuzimela futhi ithuthukise i-EPS futhi ...
Amaphuzu ku-EPS Mold
Isakhiwo esiluhlaza sinezinto ezinkulu zebhizinisi zokulanda isikhunta se-EPS ngo-2019, Sinikeze zonke izinhlobo ezahlukene zesikhunta emhlabeni wonke, njengephakethe lokwenza izinto zasekhaya, izingxenye ze-AC, ukufaka isikhunta kanye nesikhunta sokwakha i-hordi, kanye nenhlanzi nebhokisi lemifino isikhunta. ...
Yiziphi Izinzuzo Ezihehayo Ze-Eps Lines
Yiziphi izinzuzo ezikhangayo zemigqa ye-EPS? Imigqa ye-EPS ingaqedela ukulondolozwa kokushisa, futhi umhlobiso uqinile. Xazulula kangcono izinkinga ekubhujisweni komhlaba, ukuze ukwakhiwa, ukufakwa, ukufudumeza okushisayo nezinkinga zebhuloho ezishisayo zemigqa ehlukahlukene yokuhlobisa ziphathwe ...
I-Jinhua Green Building Industry & Trading Co., ltd iqoqo lomklamo wangaphandle womugqa, ukukhiqizwa, ukuthengisa, ukufakwa ebhizinisini elilodwa elihlanganisiwe.
Ucingo:+ 86-579 82728689
Ikheli:11th Floor, Redsun international plaza, No.369 Zijinsouthern rd, Wucheng, Jinhua, Zhejiang
© Copyright - 2010-2021: Wonke Amalungelo Agodliwe. Hot Products - Ibalazwe
Umshini we-Eps Foam Cornice, Eps Foam Cornice Umumo Molding Machine, Eps Cornice Molding Ukwenza, Eps Cornice Umumo Molding Machine, Eps Cornice Molding Line, Eps Cornice Molding Production Line,